Tempolin'Andriamanitra - Mana isan andro
Tany @Test taloha dia ilay tempoly naorin’i Solomona tao Jerosalema no atao hoe « tranon’Andriamanitra » tsy misy ankoatra io raha ny Tenin’Andriamanitra no jerena! Ary tao Andriamanitra no nitoetra hatramin’ny andron’i Jesosy! Izay no nahatonga an’i Jesosy ho saro-piaro t@izy io ka nilaza hoe « Ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an’ny olona rehetra… ».
Rehefa maty Jesosy dia triatra ny lamba tao @efitra masina indrindra tao @tempoly, mampiseho ny faharavàn’ny fanekena taloha sy ny mombamomba azy rehetra. Tapitra hatreo koa ny maha-tranon’Andriamanitra ilay tempoly tao Jerosalema! Porofo? Navelan’Andriamanitra ho ravàn’ny Romana ny tempoly t@ taona 70!
Aty @Test vao² dia tsy misy intsony trano nantsoina hoe: « Tempolin’Andriamanitra ». Azonao vakiana ny Test vao² iray manontolo fa tsy ahita intsony ianao hoe trano ka Tempolin’Andriamanitra no fiantso azy satria isika no lasa Tempoliny (IKor 3.16)!
Ny tempoly fahiny dia toerana masina, natao MANOKANA hivavahana, hanateram-panatitra, hamakiana ny Torah sy ny bokin’ny mpaminany ary hideràna an’Andriamanitra!
Ankehitriny, isika no Tempolin’Andriamanitra! Tempoly tsy nataon-tanana, trano fivavahana mandehandeha! Toerana tokony hiodinkodinan’ny Tenin’Andriamanitra sy ny fideràna Azy mandrakariva, Fitoerana masina izay hitoeran’Andriamanitra 24 ora @ 24 ora!